ဘီနင်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဘီနင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 6°28′N 2°36′E﻿ / ﻿6.467°N 2.600°E﻿ / 6.467; 2.600
République du Bénin (ပြင်သစ်)
"Fraternité, Justice, Travail" (ပြင်သစ်)
L'Aube Nouvelle (ပြင်သစ်)
ဘီနင်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
လူမျိုးစု (၂၀၁၃ သန်းခေါင်စာရင်း)
၃၈.၄% Fon people
၁၅.၁% Adja people & Mina
၁၂% Yoruba people
၉.၆% Bariba people
၈.၆% Fula people
၂.၉% Dendi people
မေရီယမ် ချေဘီ တလာတာ
• ဒါဟိုမေး သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခဲ့
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁ ရက်
၁၁၄,၇၆၃ km2 (၄၄,၃၁၀ sq mi) (အဆင့်: 100th)
၁၁,၇၃၃,၀၅၉ (အဆင့် - ၇၈)
၉၄.၈/km2 (၂၄၅.၅/sq mi) (အဆင့် - ၁၂၀)
$၂၉.၉၁၈ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၃၇)
$၂,၅၅၂ (အဆင့် - ၁၆၃)
$၁၁.၃၈၆ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၄၁)
$၉၇၁ (အဆင့် - ၁၆၃)
နိမ့် · 158th
ဘီနင်နိုင်ငံ (Benin)(/bɛˈniːn/ ( နားဆင်) BEN-een, /bɪˈniːn/ BIN-een; ပြင်သစ်: Bénin [benɛ̃]), တရားဝင်အားဖြင့် ဘီနင် သမ္မတနိုင်ငံ (ပြင်သစ်: République du Bénin) (ယခင်က ဒါဟိုမေး သမ္မတနိုင်ငံဟု သိရှိထားခဲ့) အနောက်အာဖရိကတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုသည်။ အနောက်ဘက်တွင် တိုဂိုနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဘာကီးနားဖားဆိုနှင့်နိုင်ဂျား တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်။ နိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်းတွင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ထိစပ်နေပြီး လူနေထူထပ်သည်။ ဘီနင်နိုင်ငံ၏မြို့တော်မှာ ပိုတိုနိုဗို (Porto-Novo) ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့ရုံးထိုင်ရာသည် အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သော ကိုတိုနို(Cotonou) မြို့ ဖြစ်သည်။ ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း (၁၁၀,၀၀၀) (စတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၄၂,၀၀၀) ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၉.၀၅သန်းရှိသည်။ ဘီနင်သည် အပူပိုင်း၊ ဆာဟာရတစ်ပိုင်း နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ 
↑ PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIO DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (in fr)။ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE။
↑ Benin - National Assembly (in en) (5 July 2018)။
↑ Annuaire statistique 2010 (PDF) (အစီရင်ခံစာ) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Institut national de la statistique et de l'analyse économique။ 2012။ p. 49။4March 2016 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BENIN en Chiffres (in fr)။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ World Economic Outlook Database, October 2018။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones၊ Daniel (2011)။ Roach၊ Peter; Setter၊ Jane; Esling၊ John (eds.)။ Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th ed.)။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-15255-6။ Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (အကူအညီ)CS1 maint: ref=harv (link)
↑ "Benin - International Cooperation". Nation Encyclopedia, June 29th, 2010
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီနင်နိုင်ငံ&oldid=665797" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။